Xubno ka tirsan Guddiga-Doorashooyinka Soomaaliya oo dalka Norway u jooga kormeer iyo wax-barasho – Kalfadhi
Xubno ka socda Guddiga madaxa-Banaan ee Doorashooyinka dalka Soomaaliya, oo maalmahan ku sugnaa dalka Norway, ayaa sheegay in u-jeedka ay dalkaasi u tageen ay tahay, kormeer iyo wax-ka-barasho ku aadan, sida ay u dhaceyso doorashooyinka golaha-deegaanka ee dalka Norway, taas oo Isniintii lasoo dhafay lasoo gaba-gabeeyay.
Ururka wada-hadalka iyo Nabada, ayaa soo qaban-qaabiyay kulan dhex-maray, jaaliyadda Soomaalidda ee dalkaasi iyo xubno ka socda Guddiga madaxa-Banaan ee Doorashooyinka dalka Soomaaliya. Cabdirisaaq Bashiir Maxamed, xoghayaha guud ee Guddiga Doorashadda Soomaaliya ayaa sheegay in 70 wadan oo ay Soomaaliya kamid tahay ay tageen dalkaasi kuwaas oo oo leh hal u-jeedo.
“Annaga markaan soo baxeyna waxaan kusoo baxnay laba arrimood, in aan wax ka baranno, waxaa ugu muhiimsan ee aan ka baranay waxaa kamid ah, iyaga oo boqol sano iyo wax kabadan doorasho ku jira, haddana wax-walba waa ay sahlanyihiin. Dhibaatadda annaga na heysata waxaa kamid ah kalsooni darro. Goobaha doorasho ee aan tagnay, wariye ma jooga xisbina ma jooga”.
Xubno ka socda Guddiga madaxa-Banaan ee Doorashooyinka dalka Soomaaliya, ayaa tegay ilaa 24 degmo oo ka tirsan dalka Soomaaliya, halkaaso oo ay ka wadeen diyaarinta warbixinta doorashada.
Xildhibaan Odowaa oo la kulmay bulshada magaalada Dhuusamareeb